ဒီကျောက်ထွင်းထုကိရိယာတွေအကြောင်းသင်သိပါသလား။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ဒီကျောက်ထွင်းထုကိရိယာတွေအကြောင်းသင်သိပါသလား။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-12-08 မူလ:ဆိုက်ကို
တရုတ်ကျောက်ထွင်းထုမှုသည်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ကျောက်ပန်းပုပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည်,ပန်းပုနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးပန်းပုစည်းမျဉ်း။ ဤတွင်ရိုးရာတရုတ်ကျောက်တုံးထုထည်ထွင်းထုကိရိယာများကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ကျောက်ထွင်းထုပစ္စည်းကိရိယာများပါဝင်ပါသည်ကျောက်ပန်းပုရုပ်ကိရိယာများ,ကျောက်ထွင်းထုလက်ကိရိယာများစသည်တို့ကိုစသည်တို့
Sထိတွေ့ခြင်းဓားခြစ်ခြင်း, ဝေငှခြင်း, ကူးခြင်း, ကောက်ခြင်း, ဖိအား, ၎င်းကိုသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာသတ္တုကိရိယာဖြစ်သည်sအရာဖြစ်သံမဏိ (BLU) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်Eing,သံမဏိ, သံမဏိ, ကြေးဝါ, စသည်တို့ကို)Tသူဓါးကို Obliq Triangle, Willow Leaf, Mao leaf နှင့် arrow ပုံသဏ္ into ာန်ခွဲခြားထားသည်။ တချို့အနားတွေမှာ serrated နေကြသည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ0ါး, သစ်သား, အရိုး, ဆင်စွယ်, ချို, ပလပ်စတစ်နှင့်အခြားပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တုမဟုတ်သောကိရိယာများဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောဖြတ်တောက်ခြင်း tools များ၏ပုံစံများကိုတစ် ဦး တည်းပုံသဏ္ဌာန်အရိုးခွံအရိုးပုံသဏ္ဌာန်, လက်မပုံသဏ္ဌာန်, Oblique တြိဂံပုံသဏ္ဌာန်စသည်တို့ကိုစသည်တို့Tသူကသေးငယ်တဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများကိုပုံစံမျိုးနွယ်မျိုးသလိုမျိုးရေ caltrop, ခြေထောက်, ဘောလုံးဖြစ်ကြသည်နှင့်ညှစ်ခြင်းပုံသဏ္ဌာန်စသဖြင့်တတိယအမျိုးအစားမှာပုံသဏ္ choble ာန်ကို ဖြတ်. ပြုလုပ်နိုင်သည်dapraperies။ မြို့ပတ်ရထား arc နှင့်စတုရန်းနှစ်ဖက်စလုံးခြစ်ရာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
STone Chisel သည်သံမဏိလှံတံပုံသဏ္ circving ာန်ရှိသောကျောက်တုံးထွင်းထုကိရိယာဖြစ်သည်။ အနိမ့်ဆုံးအဆုံးသည်သပ်ပုံစံသို့မဟုတ် conical ဖြစ်ပြီးအဆုံးမှာဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းဖြစ်သည်။ အထက်အဆုံးကိုသံတူတစ်ခုအားဖြင့်ခေါက်သည်အပေါ်အောက်ပိုင်းအစွန်း။ အဆိုပါဖြတ်တောက်အစွန်း၏အသွင်သဏ္ဌာန်အရသိရသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ချွန်ထားသည့်စက္တို့, ပြားချပ်ချပ်ပြား, စောင်းစို့နှင့်သွား chisel တို့ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည်ကျောက်တုံးထွင်းစရာများအတွက်အခြေခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျောက်ခေတ်သံတူများမှာခေါက်ကိရိယာ Appliကျောက်ခေတ်ထွန်သို့မဟုတ်သစ်သားခေါက်မှ edသစ်သားပန်းပေြာက်ကျောက်နှင့်သစ်သားထွင်းရန်ဓါး။ သူတို့ကိုအရွယ်အစားသုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်,ကြီးမားသော, အလတ်စားနှင့်သေးငယ်။ ပန်းတူသည်သံတူနှင့်ကျောက်တုံးကျောက်တုံးနှင့်တိုက်ရိုက်ထိုးခြင်း, ကြမ်းတမ်းသော, ဖြတ်ပုဆိန်သည်ကျောက်မျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်ရန်ဖြစ်သည် ပန်းပု၏ ဦး တည်ချက်နှင့်စည်းချက်ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်အပြိုင်ပါးလွှာသောလိုင်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း။
သစ်သားပန်းခွေများကိုယေဘုယျအားဖြင့် Blade, လက်ကိုင်နှင့်သံကွင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းပုံစံအရဓားလေးမျိုးရှိသည်,ပြားချပ်ချပ်, တြိဂံနှင့်ပတ်ပတ်လည်။ လည်ပင်း၏ပုံသဏ္ as ာန်အရမျိုးနှစ်မျိုးရှိသည်,ကွေးလည်ပင်းနှင့်ဖြောင့်လည်ပင်း။ အမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြီးမားသော, အလတ်စားနှင့်သေးငယ်သည့်အရွယ်အစားရှိသည်။
လေးသည်ပန်းပုအတွက် calipers ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည်အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာနိုင်ပြီးနှစ်ခုရှိသည်iဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်နိုင်သည့် vory ပုံသဏ္ clapping ခြေထောက်. Tသူသည်အချိန်မရွေးညှပ်သောခြေထောက်များကိုကွေးနိုင်သည်။
point profilerကျောက်တုံးနှင့်သစ်သားပန်းပုကူးယူရန်ဖြစ်သောသုံးဖက်မြင်ထားသော positioning တူရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်္ဂတေပုံပေါ်ရှိ Datum အချက်သုံးချက်ကိုရှာပါနှင့်align နှင့် point profiler အပေါ်ထားရှိသံမဏိအပ်နှင့်အတူသူတို့ကို fix ။Tသူကရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုရုပ်တုအပေါ်မည်သည့်နေရာအနေအထားတွင်မဆိုသော့ခတ်နိုင်သည်နှင့်လျှောအပိုင်းများ, အချက်ကိုရွှေ့ပါ Profilerကျောက်သို့မဟုတ်သစ်သားရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာရည်ညွှန်းအချက်နှင့်အတူသံမဏိအပ်ကို alignသို့ဖြစ်လျှင်အဆိုပါ pointer အပေါ်အချက်များမှတ်သားနိုင်ပါတယ်အင်္ဂတေ၏ရုပ်ထုကျောက်သို့မဟုတ်သစ်သားပေါ်မှာ။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းကိုကျောက်တုံးနှင့်သစ်သားထင်းများကိုတိကျစွာပြန်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
အပြင်ခဲတံ, ခဲတံ,အဆင့်တူရိယာနှင့်အခြားကိရိယာများသင့်လည်းဖြစ်ပြင်ဆင်ထားd။ ထွင်းထုသည့်အခါဘေးကင်းရေးကာကွယ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်, ထို့ကြောင့်ပညာရှင်များနှင့်အပျော်တမ်းနှစ်မျိုးလုံးကိုလုံခြုံရေးကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသင့်သည်,ထိုကဲ့သို့သောနားကြပ်များ, လက်အိတ်နှင့်မျက်မှန်တပ်ဖွဲ့များကဲ့သို့။ ခေတ်သစ်လျှပ်စစ်ကျောက်ထွင်းထုကိရိယာများပါဝင်သည်ကျောက် polishing ကိရိယာများ,လျှပ်စစ် grinder,ခရီးဆောင်လေ့ကျင့်ခန်းစာနယ်ဇင်းစသည်တို့ကိုစသည်တို့
wenzhouMIbond Machinery Co. , Ltd. သည်အမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်သည်ပါဝါ Tool ပစ္စည်းများအပါအဝင်Stone Grinder လျှပ်စစ်,polararyishရေ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များစသည်အမျိုးမျိုးသောနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်။ ဝမ်းသာစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းနာယကရန်.
Multifunctional mini grinder ကျောက်ပန်းပုရုပ်ကိရိယာများ ကျောက်ထွင်းထုလက်ကိရိယာများ အသေးစားအိတ်ဆောင်ကြိတ်စက် ကျောက် polishing ကိရိယာများ variable ကိုမြန်နှုန်းကြိတ်စက် Tools Kits လျှပ်စစ် လျှပ်စစ် rotary tool ကို kit Stone Grinder လျှပ်စစ် Rotary tool ကိုချိန်ညှိ